Anomatic > Careers - Hindi
How Anomatic is Responding to COVID-19 Read More
हामी एकसाथ चम्किलो बनौं
कुनै एउटा भाषा छान्नुहोस् :
एकअर्काको साथ र सहयोगमा हामी अपुर्व नतिजा प्राप्त गर्न सक्छौ।
प्रत्येक कर्मचारीहरूको सफलताको सुनिश्चितताकोलागी कर्मचारीको टिममा विविधता आवश्यक पर्छ। कर्मचारीहरूमा रहेको संस्कृतिक विविधता र पृष्ठभूमिहरुबाट आर्जन अनुभव, दर्शन, जिवन शैली, र विचारले सबैकोलागी सार्थक बातावरण निर्माण गर्छ जस्ले प्रत्येक कामदारको सफलताको प्रत्याभूत गर्दछ। एनोमेटिकमा हामी यस प्रकारको विविधतापूर्ण समुह निर्माण गर्ने प्रयत्न गर्दै छौ। हामीसँग काम गर्नकोलागी, तपाईँलाई स्वागत छ!
हामी नँया कर्मचारी भर्ना गर्दैछौ।
विविधता सहितको तिब्र विकास क्रममा रहेको टिममा समाहित हुनुहोस्।
प्रति घन्टा $15 मौसमी शुरूवाती दर प्रदान गरिन्छ।
पहिलो दिनदेखि नै स्वास्थ सम्बन्धि सम्पूर्ण सुविधा- शरिर, दाँत र आँखा ईन्सुरेन्स ।
थप सुविधाहरूमाः चारलाख भन्दा बढी डलर कर्मचारीकोलागी तलबसहितको बिदालाई छुट्याईएको र अन्य सुविधाहरू पनि।
कार्यक्षेस्थलमै काम सम्बन्धित तालिमः पूर्वअनुभव र शिप आवश्यक नभएको।
काम गर्दै जाँदा पदिय विकासको सुनिश्चता, प्रति घन्टा ५२ डलरसम्म कमाउन सकिने अवसर।
काममा लागेको उपलक्ष्यमा १००० डलरको बोनस।
आजै शुरू गर्नुहोस् नँया आवश्यक पदहरूबारेमा जानकारी लिनुहोस्।
साधारण मन्यताहरूले असाधारण संस्कृतीको विकास गर्छ।
विविधता र समावेशिता
सुरक्षित र समावेशी वाताबरणको विकास गर्ने जस्ले हाम्रा कर्मचारीहरू र उनीहरू बसोबास गर्ने समुदायलाई उत्प्रेरित राख्छ, आवश्यक सहयोग गर्छ र विविध विचारहरूलाई आदर-सम्मान गर्छ।
निष्ठापूर्वक कार्य गर्ने
सत्य र निष्ठामा कुनै सम्झौता नगरी ईमान्दारी र गौरब पूर्ण तरिकाले कार्य गर्ने।
अरूलाई आदर सन्मान
फरक राय र विचारलाई महत्व दिने, पृष्ठपोषण दिने र रायलाई तुरून्त कार्यन्वयन गर्ने।
सहयोगी वाताबरण कायम राख्ने जुन अवस्थामा सबैजनाको संलग्नताको सुनिश्चता हुन्छ।
हाम्रा कम्पनीहरूको संचालनका क्रममा पर्यावरण र वरिपरीका समुदायलाई न्युनतम नकरात्मक पर्यावरणीय प्रभाव गर्नेगरि र दिगो भविष्यकोलागी सुजबुझ सहितको कार्य गर्न।
स्वस्थ र सुरक्षित कार्यस्थल
कर्मचारीहरु को स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र दुर्घटनाहरु, हिंसा, र सबै किसिमका उत्पीडनबाट मुक्त कार्यस्थल प्रदान गर्न को लागी कानूनले तोकेको परिधि भन्दा पनि बढी सुनिश्चितिता प्रदान गर्न।
अपनत्व र महत्व
कम्पनी र ग्राहकहरूलाई आफ्नै जिवनको महत्वपूर्ण भाग मानेर तिनको आवश्यकताको ख्याल गर्ने। आवश्यक सेवा तुरून्त दिने।
सबैजनाको सहभागिता सहितको सफलता
जितहरूलाई उत्सवको रूपमा मनाऔ र असफलताहरूबाट सिकौं।
कर्मचारीहरूलाई सहि नतिजाकोलागी पहलकदमी गर्न र सक्दो मेहनत गर्न अभिप्रेरति गर्न। त्रुटि-अँगाल्ने वातावरण अंगालेर कर्मचारीहरूले नेतृत्व लिने र निर्णय गर्न सक्ने गरी सशक्तिकरण गर्ने।
समाजको एउटा सक्रिय सदस्य भएर समाज विकासकोलागी योगदान गर्ने र कर्पोरेट सामाजिक दायित्व बहन गर्ने।
आफूले गरेका कार्य, उत्पादन, निर्णय, र नीतिहरुकोलागी स्विकारयुक्ती र जिम्मेवारी ग्रहण
बहु-संस्कृती, एउटा लक्ष्य
हाम्रा कर्मचारीहरू विश्वका विभिन्न स्थान र फरक अनुभव सँगालेर आएका छन्। हामी निरन्तर सहभागिता र निष्ठाको संस्कृती विकास गर्ने लागि परेका छौ। हामी सबै एउटै लक्ष्यकोलागी कार्य गरि रहेका छौ।
Courtney Whitfield रसायन अपरेसन म्यानेजर
Stacey Blankenship एनोडाईजिङ्ग क्रु लिडर
Troy Hobbs ईन्जिनेरिङ्ग डाइरेक्टर
शुरू गर्नकोलागी तयार हो त?
आजै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस! नँया खुलेका पदहरूको बारेमा जानकारी लिनुहोस्।
काम गर्नकोलागी अत्यन्तै राम्रो कम्पनी। सुन्दर भविष्य बनाउनकोलागी अझै उत्कृष्ठ कम्पनी।
हामी अद्भुत सामग्री निर्माणमात्र गर्ने होईन, हाम्रा कर्मचारीहरूको करियरको विकासको बारेमा मनन गर्छौ। हामी आन्तरिक मुल्यांकनबाट कर्मचारीहरू (सुपरभाईजर समेत)लाई प्रमोसन दिनकोलागी केन्द्रित रहने गरेका छौ। साथमा कसैले चाहेमा अध्यनकोलागी यथेष्ट अवसर उपलब्ध गराउन पनि केन्द्रित रहेका छौ।
प्रतिश्पर्धी ज्याला दर
हाम्रा कर्मचारीले आफ्नो मुल्य राम्ररी पहिचान गर्न सकुन र सस्तोमा श्रम बेच्न नपरोस् भन्ने कुरामा सचेत छौ। हाम्रो यस्तो विश्वास हामीले यसरी उदाहरणको रूपमा पेश गरेका छौं।
कामकोलागी सहि गरेपछि दिईने बोनस।
कसैलाई कामकोलागी रिफर गरेकोमा दिईने बोनस।
लामो समय कम्पनीमा कार्यरत भए बापत दिईने बोनस।
हाम्रा पूर्णकालिन कर्मचारीहरूलाई कम्पनीले प्रदान गर्ने सबै सुविधाहरू प्रदान गरिने छ, ति मध्ये केहि तल उल्लेख गरिएको छः
शाररिक, दाँत, र आँखा उपचारको ईन्सुरेन्स
कम्पनीले तिर्ने जिवन विमाको रकम
दुर्धटना मृत्यु र अंगभंग ईन्सुरेन्स्
अल्पकालिन शाररिक अशक्तता
HSA अथवा FSA
सबैलाई ४०१ हजारको बिदा रकम
तलब सहितको बिदा
पहिचान चोरी सुरक्षा
हाम्रो विशेषज्ञ टिममा जोडिनु होस्।
कुनै साथीले तपाईँलाई कामकोलागी सिफारिस गर्नु भएको हो? साथीलाई प्रतिफल दिलाउनुहोस्।
यदि कुनै साथीले तपाईँलाई कामकोलागी सिफारिस गर्नु भएको हो भने उक्त साथीको नाम अन्तर्वाताको समयमा बताउनु होला। तपाईँलाई कम्पनीले नियुक्त गरेको खण्डमा तपाईँको साथीले बोनस रकम प्राप्त गर्नुहुनेछ!
करियर अभिरूचि फारम
के तपाईँ एनोमेटिकमा नँया करियर शुरू गर्न चाहनुहुन्छ? तलको फारम भर्नुहोस् र हाम्रो कर्मचारीहरूले तपाईँसँग सम्पर्क गर्नुहुनेछ।